फ्रिसल्याण्ड, आफ्नै भाषा र संस्कृति फ्रिसल्याण्ड भनिने आइसल्याण्ड अन्तर्गत एक टापुमा प्रयोग भएको थियो? मार्टिन भिजल्याण्ड
फ्रिसल्याण्ड, आफ्नै भाषा र संस्कृति फ्रिसल्याण्ड भनिने आइसल्याण्ड अन्तर्गत एक टापुमा प्रयोग भएको थियो?
मा दायर इतिहास	by मार्टिन भिजल्याण्ड	7 जनवरी 2017 मा	•7टिप्पणिहरु
कतिपय छिटो इतिहास फ्रिसल्याण्डको अन्वेषणको साथ साबित हुने जस्तो देखिन्छ जुन पुराना अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालयहरुमा देखा पर्दछ। के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि कसरी यो सम्भव छ कि नीदरल्याण्डको उत्तरमा बस्ने यस्तो सानो जिद्दी मान्छे छ जो भाषा बोल्छ जुन डचबाट पुरा तरिकाले फरक छ र अंग्रेजीको नजिक छ? इङ्गल्याण्डमा एक भन्न छ कि पढ्छ 'फ्रिसियन अंग्रेजी हो तर मक्खन पनीर हो'; अनुवाद 'फ्रेन्सी अंग्रेजी पनीर को मक्खन को रूप मा छ। " जुन 2014 मा मैले ठूलो पाएको खोज जुन वर्ष 1680 एक वर्ष नक्सामा साइन इन भएको थियो जुन ग्रीनल्याण्ड (आइसल्याण्ड अन्तर्गत) दक्षिणमा रहेको थियो, जो आइसल्याण्ड भन्दा ठूलो थियो र एक भ्रामक व्यक्तिले बस्यो। यस द्वीपमा घनी जनसंख्या भएको थियो र 500 हरुसँग 1 लाखका लागि अनुमान गरिएको थियो। त्यो हो त्यस समय अघि धेरै धेरै। संदिग्ध अवस्थित छ कि यस द्वीपको एक निश्चित क्षणमा स्यालो हुन्छ, उदाहरणका लागि, एक समुद्री बाकस।
फ्रिसल्याण्डको द्वीपको विफलताको सही कारण अवश्य अनुमानित छ। तथापि, केही इतिहास पुस्तकहरूले देखाउँछ कि फ्रान्सिसी व्यक्तिहरूले पहिलो पटक इङ्गल्याण्डमा बस्न खोजे र त्यसपछि नीदरल्याण्डको उत्तर भ्रमण गरे। अब हामी सबै जान्दछ कि फ्रेसर बोनसियसलाई मारियो वर्ष 754 को आसपास छ। त्यसोभए फ्रेरिसीहरूले पनि आफ्नै द्वीप बाहिर बसे। संभावनाहरू छन् कि तिनीहरूले नेदरल्यान्डको उत्तरी भाग पकडे र त्यहाँबाट कारोबार गरेका थिए।
इतिहासको अर्को भाग जुन यस द्वीपको अन्त्यको साथ पूर्णतया भिन्न प्रकाशमा आउछ अमेरिकाको खोजको कथा हो। बेशक, पुरानो देशी भारतीयहरु को एक स्कैडिनेवियाई मान्छे को बारे मा कुरा भएको थियो जो कोलम्बस ले यो गर्नु भन्दा महाद्वीप सम्म पुग्यो। अमेरिकी निवासीले 'redbeard' को बारेमा बोल्ने गर्थे। यो धेरै धेरै वर्णन गर्दछ, किनभने फ्रिसियन राजा रेडब्याड भनिन्छ; राम्रो तरिकाले नाम Radboud नाम मा जानिन्छ। रेडब्याड 'लाल दाढ़' को भ्रष्टाचार हो। विकिपीडियाको अनुसार, रेडबाउको जवान र जवान वर्ष बारे केही पनि थाहा छैन। यो अझै जस्तो देखिन्छ कि फ्रिसियनहरूको इतिहास जानबूझेर टाढाको छ। यद्यपि पछिल्लो संस्करणमा यो दावी गरिएको छ कि उनी एल्डगिसको छोरा थिए, त्यहाँको समय स्रोतको लागि कुनै प्रमाण छैन। उहाँ निस्सन्देह फ्रान्सिस्को अभिजात वर्गका परिवारमा हुर्के र उनीहरूको मृत्युपछि पछि 680 सम्मसम्म पुग्न सकेनन। Aldgisl.
यसबाहेक, विकिपीडियाले उल्लेख गर्दछ [उद्धरण] Radboud एक शक्तिशाली शासक को रूप मा देखाएको छ, तर उनको शासनकाल को शुरुआत निराशाजनक थियो। उहाँ बारम्बार यसको साथ संघर्षमा भाग्नुभयो फ्रैंकिश साम्राज्य र आफ्नो शक्तिशाली छिमेकीप्रति अधीनस्थ भूमिका निपटाउन थियो। 688 र 695 बीचको, उनले फ्रान्सेडको युद्धमा समेत फ्रैंकिच अदालतको व्यक्ति पेपिज वान हर्टलको विरुद्धमा धेरै हराएको थियो। मध्य-उन्मादहरूमा, Radboud र Pepijn अन्तर्वार्ता सम्पन्न, रेडबाउड फ्रिजिया सिटिरेयरको साथ, ओउडे रिजको दक्षिणी क्षेत्र। यस शान्तिको भाग राडबाउको छोरीको बीच विवाहको निष्कर्ष थियो Theudesinda भेट Grimoald, को एक छोरा Pepijn van Herstal, जो 714 मा हत्या भएको थियो। यो विवाह थाहा छैन यदि बच्चा जन्मेका छन्।
कुनै पनि अवस्थामा, यो उल्लेखनीय छ कि नेदरल्यान्डको उत्तरका साना मानिसहरू राजा थिए। तपाईं ती राजाहरू कहाँ बस्नुभयो भनेर सोच्न सक्नुहुन्छ? हामी वर्तमान उत्तर प्रांतमा यस महानता को महल देख्दैनौं। फ्रिसल्याण्डको द्वीपको विफलतामा कथन झूटो हुनेछ? के त्यो मानिसहरूको आधार थियो? यो जस्तो कि विन्स्टन चर्चिल शासन पहिले नै लागू भएको छ: "इतिहास विजेता द्वारा लिखित छ। " प्रश्न यो विजय वास्तविक प्रसार संग Frankish साम्राज्य वा यो विजय द्वीप Frisland पृथ्वीको प्राकृतिक प्रकोप द्वारा बह थियो भन्ने तथ्यलाई द्वारा बस हासिल गर्न सकिएन थियो कि छ। सम्भवतः, फ्रान्सेश साम्राज्यले यसको मौका लिनुभयो र फ्रेन्सियनहरूमाथि प्रभुत्वको उत्तरी नीदरल्याण्डको अंशलाई सम्झे। यो सम्भवतः इतिहास हो जुन परिवर्तन भएको छ र फ्रेजिशियनले तपाईलाई पूर्ण रुपमा अनावश्यक कथा संग गर्न पर्छ विकिपीडियामा यहाँ पढ्नुहोस्। सायद फ्रिसियनहरूको लागि उनीहरूको वास्तविक जडहरू गुप्त गर्न समय हुनेछ।
एक निबन्धमा भेट्टाउन यो लिङ्क (शीर्षक 'फ्रिसल्याण्ड: यस देशको समय बिर्सिएको छ') लेखकले रिपोर्ट गर्दछ कि अंग्रेजी फ्रिसल्याण्डको दावीमा दावी गर्न खोजे, तर यो असहमति हो।
Friesland को द्वीप (अधिक सामान्य हिज्जे), प्लस एस्टोटिलाल्याण्ड, पहिलो पल्ट 1558 मा जनता को ध्यान को तहत आयो जब एक निश्चित कैटरिनो जेनो वेनिस मा संगै कहानी संग एक नक्शा प्रकाशित गरे। उहाँले 1380 (एक त्रुटी, वास्तविक वर्ष 1390 मा बनाइएको टाढा उत्तर उत्तरको लागि एक यात्राको वर्णन गर्नुभएको थियो) को उपाध्यक्ष द्वारा, जसले निकोलो जेनो भनिन्छ। यो पहिले जेनो फ्रिस्ल्याण्डल्याण्डको द्वीपमा तूफानमा उडाउन बाध्य भएको थियो। संलग्न नक्साले उत्तर र दक्षिणबाट लामो अक्षको साथमा लगभग आयताकार आकारको टापु देखाउँछ। यो आकारमा सानो सानो छ, तर आइसल्याण्ड भन्दा ठूलो छ र लगभग स्थानमा छ जहाँ रल्कल प्लेटोटो अब खडा हुन्छ। 1380 (फ्यूचर 1390) मा फ्रिसल्याण्ड को शासकलाई जिमीमा भनिन्छ। उहाँले निभोकोलाई भेनिस वेनिसहरूको कौशलको लागि प्रशंसा गर्नुभयो। यो नयाँ मित्रताले ज़िम्मिनीलाई धेरै छिमेकी क्षेत्रहरूमा आफ्नो शक्ति विस्तार गर्न सक्षम बनायो। फिर्तीमा निकोलो नम्र थियो। निकोलोले आफ्नो भाइ एन्टोनियोले भेनिसमा लेखे। यो फ्रिसल्याण्डमा आइपुग्नुभयो र सामेल भयो। दुवै Friesland मा 1384 मा (शायद, वास्तव मा, 1396) मा बस्न, जब निकोलो मृत्यु भयो। त्यसपछि एन्टोनियो अर्को दस वर्षको लागि जुचीमा सेवामा रह्यो। 1394 (सही 1406) एन्टोनियो भेनिस फर्कियो, जहाँ उनले आफ्नो तेस्रो भाइ कार्लो।
जीनो नक्शाले फ्रिसल्याण्डको उत्तरपश्चिममा एउटा सानो टापुलाई Icaria भनिन्छ, र अगाडी पश्चिम को एस्टोटिल्याण्ड। Estotiland मात्र आंशिक रूप देखि देखाइएको छ। डा डाइको युगमा यो टापु नोवा स्कोस्टिया भनिन्छ। दक्षिणमा डुबियो नामको अर्को आंशिक तटवर्ती क्षेत्र हो। यो सम्भवतः हामी अहिले मा मासाचुसेट्स बेको रूपमा जान्दछौं। डा डी ग्रीनल्याण्ड नक्शामा छैन र यस नक्सामा बफिन द्वीप देखा पर्दछ (यसको स्थिति दिइएको छ)। फ्रिसल्याण्डको पूर्वमा तपाईंले नर्वे, डेनमार्क, स्कटल्याण्ड र शटल्याण्ड्स (लेबल एस्टल्याण्ड) को प्रसिद्ध कोटिहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो दुई बीचको एउटा पोडांडा भनिन्छ। यो उल्लेख गर्नु पर्छ कि यो सम्भव छैन कि युरोपियनहरुले कोलम्बस भन्दा नोवा स्कोस्निया र मैसाचुसेट्स को यात्रा गरे। यो कहीं पनि उल्लेख गरिएको छैन। हामीलाई थाहा छ कि वाइकिंग्स निकै नजिक आइपुग्यो र वर्ष 1000 वरिपरि न्यूफाउन्डल्याण्डमा निपटान बनाइयो। केही शोधकर्ताहरूसँग एक गम्भीर संदेह छ कि उत्तरी नाविकहरूले यो यात्रा नियमित रूपमा, ब्रस्टोलसँग आफ्नो मुख्य प्रस्थान विभागको रूपमा गरे। जेनो कार्डको वास्तविक रहस्य निश्चित छ: फ्रेसल्याण्ड के थियो र यो कहाँ गयो? छैटौं शताब्दीबाट फ्रिसल्याण्डले सबै प्रकाशित नक्सामा भूतको रूपमा देखा पर्न थाले। स्थान सधैँ आइसल्याण्डको दक्षिण थियो, तर कसैलाई कसैले थाहा छैन जहाँ। एक्स्युल्युलेसनले उत्पन्न भएको यो बारे आंशिक छ कि यो आंशिक रूपमा 1380 (सही 1390) पछि बाढी भएको छ।
1578 मा एक सानो सानो द्वीप फ्रिसल्याण्ड को संदिग्ध स्थान मा देखा पर्यो। त्यस वर्षमा सेप्टेम्बर 12 मा, रिचार्ड न्यूटन, कप्तान ईम्यानुएल (पन्द्रह जहाजहरु मध्ये एक कि सर मार्टिन फ्रोबिशर को नेतृत्व को अभियान को एक भाग हो) एक अभियान मा यस द्वीप को भेटिन्छ। उनले जहाजको प्रकार अनुसार बोस आइल्याण्डलाई बोलाए। तिनको पत्रिकामा तिनले लेखे: को BUSSE, Bridgewater को, त्यो homeward आयो रूपमा तिमीहरू गर्न दक्षिण Warde वा Frese भूमि अझै founde अघि धेरै अनुयायीहरूलाई कहिल्यै कसरी थियो अक्षांश वा _ डिग्री, एक ठूलो Ilande discoured र तट alongst तीन dayes sayled, fruiteful हुन seeming देशमा , जंगल देखि भरी, र एक चैंपियन काउंटी।
ग्यारह वर्षपछि, थमस वाइर्सले यो बस्ट टापुलाई ठूलो बर्फको क्षेत्रले घेरिएको द्वीपको रूपमा वर्णन गरे। यसले टापुको अघिल्लो विवरणको विरोध गर्दछ। त्यसपछि अचानक, 1 जुलाई 1606 मा, बोस आइल्याण्ड जेम्स हॉल द्वारा हेर्नुभयो। यसले स्थानलाई अझ लामो समयसम्म उल्लेख गरेको भन्दा बढी स्थानको वर्णन गर्दछ। यद्यपि, यो खोजी गर्न धेरै प्रयासहरू भए तापनि, बिसमा आइल्याण्डले 1671 को भ्रामक बनेका बेला कप्तान जॉन शेफर्डले यो नसोचेको मात्र होइन, तर यो पनि अन्वेषण गरे। उनले यसलाई माछा मा प्रचुर मात्रामा रूपमा वर्णन गरे, तर अन्यथा नचाहिने र कम बोल्ने।
13 मा मई 1675 प्रदान राजा चार्ल्स द्वितीय, र विभिन्न उत्तरी क्षेत्रको शुल्क (जो अझै पनि एक क्यानाडा कम्पनी रूपमा अवस्थित) Buss द्वीप स्वामित्वमा खनिज व्यापार शोषण 1670 मा स्थापित भएको थियो जो हडसन गरेको खाडी कम्पनी, गर्ने । जाहिर छ, चार्ल्सले राजा को आर्थरको विरासतले गर्दा त्यसो गर्नको अधिकार थियो, जसले उत्तर कोरियाले हजारौं वर्ष पहिले उत्तरी भूमिलाई जिते। यद्यपि यो पनि ध्यान दिनु पर्छ कि स्कटिश क्राउनले यी एनएनएनएमएक्सबाट उत्तरी पानीमा सर्वसाधारणको दावी गरे। चार्ल्स II, निस्सन्देह, इङ्गल्याण्ड र स्कटल्याण्डको राजा थियो। हडसन बे खा कम्पनीले टापुका लागि राजा £ 1476 भुक्तानी गर्यो। तथापि, 65 मा, तिनीहरूले यसलाई फेला पार्न सकेनन्। 1676 मा, £ 1720 सरकारी सब्सिडी अनुरोध को एक अभियान को लागि अनुरोध गरियो। यो अनुरोध तुरुन्त अस्वीकार गरिएको थियो। तर 378.000 गोप्य व्यापार को वित्तीय नियन्त्रण राख्ने क्रममा Buss द्वीप को साँचो स्थान राख्न आफ्नो व्यापार आरोप मानिसहरू थिए। त्यसैले 1770 कम्पनी यसलाई (यो कहिल्यै थियो रूपमा अब पानी माथि), तिनीहरूलाई सम्बन्धित कि 'यस्तो कुनै द्वीप अवस्थित घोषणा। 1791 मा कम्पनीले यो उत्तर एटलान्टिक मा एक mythical द्वीप थियो बताए।
फ्रिसेल्याण्ड र बोस आइल्याण्डका यी विभिन्न रिपोर्टहरू एक सहज कहानी प्रदान गर्छन्। 1380 (सही 1390) Friesland शहरहरु र कृषि र Zichmni नामक एक शासक को लागि पर्याप्त थियो ठूलो थियो, जो पर्याप्त छिमेकी द्वीपहरु को जीत को लागि शक्तिशाली थियो। 1578 मा यो सानो सानो टापुमा सिक्यो, तथापि, अझै पनि उपजाऊ र जंगल थियो। 1589 (केवल ग्यारह वर्ष पछि) यो ठूलो बर्फ क्षेत्रको घिमिरे थियो र 1671 मा यो दुर्लभ र कम झूटो थियो। यो फेरि कहिल्यै देखिएन। धेरै अन्वेषकहरू स्पष्ट निष्कर्षमा आए, अर्थात् यो बिस्तारै समुद्रमा गायब भएको थियो। सायद त्यहाँ अझै सानो सानो डट देखाइएको छ जुन रकलको रूपमा बचाइएको छ। रक्ल 1972 मा यूनाइटेड किंगडम द्वारा अनुलग्न भएको थियो। यो अन्तिम 'रिमोट स्कटिश टापु', स्कटल्याण्डको पश्चिम र नर्वेको पूर्व हो। व्यासमा केवल केहि मीटरमा यो पूर्णतया अपरिहार्य छ।
स्रोत लिङ्क सूची: विकिपीडिया, विकिपीडिया, historum.com
मेमोरीमा 11 सेप्टेम्बर (9 / 11) 2001 मा रिमाइन्डर
टाइटैनिक बीमा धोखाधडीको पुरानो साजिश हो
द्वारका, भारतको अटलांटिस, आज भन्दा भन्दा उच्च प्रविधि
भविष्यमा सबैजना इन्टरनेटसँग एक दिमाग जडान गर्दछ
ट्याग: Buss Island, विशेष, Friesland, फ्रेस्ल्याण्ड, इतिहास, किंग रेडबड, निकोलो ज़ेने, रकल पठाउ, Zichmni
7 जनवरी 2017 मा 15: 27
उल्लेख गर्नु हुँदैन: जर्मनी र डेनमार्कमा फ्रेजिशियनहरू। यो स्पष्ट छ कि एक मान्छे थियो जुन पूर्वमा समुद्र तटमा उभिनु भएको थियो जहाँ तिनीहरू थिए र त्यहाँ गए।
10 जनवरी 2017 मा 13: 01
सबै आधुनिक इतिहास झूटो छ, जबसम्म मानवता सत्यबाट टाढा टाढा छ यो थाहा पाउनेछ के जीवन को सार छ। तिनीहरू मध्य युगको 'अन्धकार युग' को रूपमा वर्णन गर्छन्, तर ती अन्धकारका उमेरहरू अवस्थित छन्।
यस पृथ्वीमा धेरै युद्धहरू सत्यको विरुद्धमा निर्देशित गरिएका छन्, प्रकाशले त्यसोभयो झूट बढ्न सकिन्छ र अधिवेशनद्वारा समेटिएको छ (चर्चिलको विवरण हेर्नुहोस्)। यसकारण हामीले धेरै मानिसहरू र सम्बद्ध संस्कृति, भाषा, वास्तुकला चमत्कारहरूको समयको समयमा गुमाएका छौं।
यस पृथ्वीमा monolithic संरचनाहरूको मूल र (गणितीय) ज्ञानमा रुचि राख्ने व्यक्तिले कार्ल मिङ्कद्वारा निम्न वृत्तचित्र सिफारिस गर्दछ:
"कोड" भाग 1 वा3| म्याट्रिक्स प्रकट गरियो
11 जनवरी 2017 मा 13: 25
युरोपको सम्पूर्ण बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै छ, यो गति एक स्वायत्त क्षेत्र à ला बास्क देश / क्यालोलोनियाको बारेमा सोच्न आएको छ। फ्रिसिसी राज्य, फ्रिसिया:
11 जनवरी 2017 मा 13: 28
11 जनवरी 2017 मा 14: 00
पुरानो अंग्रेजी पुरानो फ्रेन्सीसँग सम्बन्धित एक भाषा हो, दुवै जर्मन भाषाहरूको पश्चिमी जर्मन शाखा, भारत-युरोपेली भाषा परिवारको सब-समूहको गठन गर्दै।
प्रोटो-भारत-युरोपियन प्रमो-इन्डो-युरोपेली भाषा (PIE) को बोल्नेहरू थिए। तिनीहरूका ज्ञान भाषाई पुनर्निर्माणबाट प्रमुख हुन्छन्। केहि पुरातत्वविद्हरूको अनुसार, PIE वक्ताहरू एकल, पहिचानयोग्य व्यक्ति वा जनजातिलाई विचार गर्न सकिँदैन, तर पछि प्रागिकिक, कांस्य युग इन्डो-युरोपियनहरू पछि पछिल्लो पुस्ताका समूहहरू थिए। तथापि, यो दृश्य भाषाविद् द्वारा साझा गरिएको छैन, जस्तै प्रोटो-भाषाहरू सामान्यतया साना भौगोलिक क्षेत्रहरूमा कब्जा गर्छन्, र सामान्यतया नजिकका एक समूहहरू जस्तै एक बन्दोबस्त समुदायहरू द्वारा बोलाइन्छ।
निम्न परिवर्तनहरू प्रोटो-जर्मनिक प्रोटो-जर्मनको इतिहासमा चिनिन्छन् जसले पारस्परिक रूपमा असंगत बोलपत्रहरू तोड्न थाले।
11 जनवरी 2017 मा 14: 08
जनजातिहरू / कन्सहरूको राम्रो व्याख्या
14 जनवरी 2017 मा 02: 56
यो लेख व्यक्तिगत रूपमा मेरो लागि धेरै सुरूवात छ, कहिल्यै थाहा छैन। म आफैंले आफुलाई भेट्न चाहान्छु। मैले भनेकी थिईन, "म तिम्रो माया गर्छु।" मैले भनेँ। एक पटक फेरि आशा छ कि यो जारी छ / हजुरआमा म पनि आइसल्याण्डमा जान चाहन्छु भन्छु, तर कोही पनि सामेल हुन चाहन्छु, किनभने मानिसहरू सोच्दै त्यहाँ यो ठंड हुनेछ, धेरै मानिसहरू एक देशमा जान्छ जहाँ यो न्यानो हुन्छ छ ... राम्रो। तपाईले सोच्नु भन्दा मानिसहरूको जीनमा थप भण्डारण गरिएको छ। राम्रो लेख मार्टिन, धन्यवाद!
« प्रहरी र सहायक कार्यकर्ता विरुद्ध आशंकाको हिंसा? Tasers, bodycams र भारी आतिशबाजी मा प्रतिबंध!
आत्महत्या 15 पुरानो थरूक्षेत्र सेल्भम वासनाar देखि Anass Aouragh को सम्झना छ »
कुल भ्रमण: 14.045.514
मार्टिन भिजल्याण्ड op रोबर्ट जेन्सेनको "डोनाल्ड ट्रम्पले नयाँ विश्व अर्डरमा विश्वास गर्दैनन्" भनेर प्रमाणित गर्दछ: जेन्सेन.एनएल नियंत्रित विपक्षमा छन्